Hay’adda Amnesty International oo sheegtay Kenya in aysan Qaxootiga Dhadhadhaan ku qabsi karin Soomaaliya in ay aadaan. – Radio Daljir
Nofeembar 15, 2016 4:43 g 0
Arbaco, Nofeembar 16, 2016 (HOL)-Ururka caalamiga ah ee u dooda xaquuqul insaanka ee Amnesty International (AI) ayaa sheegay in dawlada Kenya ay ku qasbeyso qaxootiga Soomaalida ah ee kunool xeryaha Dhadhaab inay Soomaaliya aadaan.
Waxay AI sheegeysaa in saraakiisha dawlada Kenya ay ugu dardaar wariyaan qaxootiga Soomaalida ah ee kunool Dhadhaab in hadii aysan si iskood ah ugu laaban Soomaaliya wixii loo gaaro dhammaadka bishaan qasab lagu rari doono oo Soomaaliya qasab lagu geyn doono.
AI waxay sidoo kale farta ku godday hayada QM gaar ahaan laanta UNHCR oo ay sheegtay inaysan si wanaagsan usiin qaxootiga xogta saxda ah ee halista colaadeed ee ka jirta wali qeybo badan oo Soomaaliya ka tirsan. In badan ayaa hayadaha xaquuqul insaanku kusoo celceliyeen in kala dhimmanaan dhanka xogta ah oo amuurtaa kusaabsan ay jirto.
Waxay sidoo kale AI sheegtay in arimaha guriyeynta iyo maciishaduba ay ciriiri yihiin gudaha dalka Soomaaliya waqti xaadirkaan.
Afhayeenka dawlada Kenya Eric Kiraithe ayaa si kastaba ha ahaatee beeniyay in qaxootiga qasab lagu rarayo.
Wuxuu kaloo sheegay in in badan oo qaxootiga Dhadhaab ah ay iskood u doonayaan inay Soomaaliya aadaan.
Waxay ahayd bishii 5aad ee sanadkaa markii wasiirka arimaha gudaha ee Kenya Joseph Nkaisery uu sheegay in kama dambeys bishaan 11aad la xiri doono xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Qaxootiga xeryaha Dhadhaab ee Soomaalida ah ayaa colaada iyo abaaraha Soomaaliya kasoo cararayay oo halkaa imaanayay laga soo bilaabo horraantii sagaashameeyadii wax yar kadib markii dawladii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay